Muva nje, ezimakethe zaseRussia namazwe e-CIS, amathayi avela ukuthi ayengakaze abonwe ngumthengi omkhulu. Ezimweni eziningi, lezi zinto aziziwa ngezandla ezivela eSouth-East Asia, noma izinsizakalo zemikhiqizo eyaziwayo. Phakathi kwazo zonke lezizinto ezihlukahlukene, ngezinye izikhathi akulula ukuthola Izimpahla eziwusizo futhi zingabandakanyeki ezintweni eziphansi zomthengi. Ezimweni eziningi, uzobona ukuthi uthenge umkhiqizo ophansi, ngeshwa kuphela lapho, ngokubanda ukuphefumula okubukhali, i-rubber izoqala "ukugubha" futhi ingenziwanga Ngeke kwenzeke njalo ukugwema usizi. Ngeshwa, phakathi kwazo zonke lezi zinqwaba kanye nokuhlukahluka, emakethe yethu kukhona amathayi ngempela anezici eziphezulu zobuchwepheshe, ngisho namanani akhangayo! Ucabanga ukuthi lokhu akukwenzeka? Amathayi aseYurophu, ngokwezinto zobuchwepheshe zanamuhla ezivela ezintweni eziphezulu zezinto ezibonakalayo azikwazi ukukwazi ukuzithengisa? Khona-ke awukho kahle! Ukuhlangabezana: Leli thayi ngaphansi kwegama lakwaSava, lihlanganisa konke engikubhalile ngenhla. Futhi kungenzeka yini ukuqeqesha ihhashi lakho le-iron kumathayi anjalo?
Okokuqala, lo mkhiqizo uneminyaka engaphezu kwengu-80 emlandweni wawo. Ekupheleni kweminyaka yama-1990, le nkampani yangaphambili yaseYugoslavia yatholwa yi-GOOD YEYAKA enokukhathazeka futhi kusukela ngaleso sikhathi ama-Sava amathayi ayenemikhiqizo ephezulu eyenziwe ezitolo zaseGoyeye eJalimane, ePoland. Futhi iSlovenia. I-share of sales of Sava amathayi ezimakethe zakwa-Yugoslavia yangaphambili inkulu kakhulu. Ngaphezulu kwengxenye yomkhiqizo kukhishwa futhi sekuvele kwaziwa kubathengi cishe kuwo wonke amazwekazi. Ikhwalithi yama-Sava amathrekhi ayilungile, ukwakheka kwendiza ye-rubber, futhi iningi lemidwebo ikhophi umfowenu omdala omude wamatayari OMTHETHO WONYAKA, onomthelela omuhle kwikhwalithi nokuphila isikhathi eside kwamathayi. Ngesikhathi amathayi amaningi, okuthiwa "umugqa wesibili" wemikhiqizo edumile, njengomthetho Kungaphansi kwemikhiqizo yenkampani yomzali, ama-Sava amathayi aphansi nezephansi komugqa oyinhloko we-goudier, ngenkathi umile ngamaphesenti angaba ngu-30 eshibhile. Ama-Sava amathayi anezo zonke izitifiketi ezidingekayo zokuhambisana nokulungiswa, kufaka phakathi nezimo zaseRussia. Izicucu ezingaphezu kwezigidi eziyisithupha.Ngakho-ke, uma ufuna ukuthola ikhwalithi yomkhiqizo owaziwayo ngentengo ecacile, ukukhetha kwamathayi we-Sava kubheka njengokuthengwa okufanele! Inkampani yethu ibilokhu ithengisa amathayi alo mkhiqizo ngomnyaka wesithathu olandelanayo kanye nesikweletu somenzi, akukho izikhalo ngenxa yemboni Kuyathakazelisa ukuthi abathengi abasha abaningi baseSava amathayi afika eselulekweni sabangane nabajwayelene nabo abakwazi ukuhlola amathayi aseSava ngokwabo ngaphambili futhi abenezimpendulo ezinhle ngalezi zinsuku ngempela ikhwalithi engabizi shinah.Deystvitelno ngokwanele, ngoba njengoba uthi kumabonakude commercial adumile: "Uma kukhona mehluko ke kungani akhokhe imali ethé xaxa?"
Ngithemba ukuthi lolu cwaningo oluncane luzokuvumela ukuba wenze okulungile futhi ngesikhathi esifanayo ulondoloze imali eningi kwabaningi. Ukukunika emigwaqweni futhi, njengoba bethi, akukho isikhali noma induku!
Uhlolojikelele Suzuki Gsx-R izici isithuthuthu 600
Unesibopho esingokomthetho futhi onelungelo elingokomthetho
Sitolo sekudla lokuphekiwe nezindawo zokudlela ezinhle, lapho unga ngotshwala yakho (Voronezh)